Isihogo masikhulule iiHacks ezikhohlisayo ats Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Isihogo Masihambe ethubeleza
Akukho nto iya kuma phakathi kwakho kunye noloyiso ngelixa udlala isihogo Masikhulule, njengoko ii-hacks zethu zingayi kuvumela! Fikelela kweyona ndawo ingcono yesihogo Masikhuphe iAimbot, i-ESP, iWallhack, kunye neRadar kanye apha eGamepron!
Sele uyithengile iHell Let Loose Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge isihogo sethu Masikhululeke, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Isihogo Masihambe Hacks
Isihogo masikhulule iiHacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga Isihogo Masihambe IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha isihogo Masikhulule kwimidlalo emininzi ebekiweyo apha kwiGamepron
Khetha zonke izinto ocinga ukuba ziyafuneka ukuze ube sisihogo Masikhulule!
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iindlela zokuhlawula ezikhoyo (100% ikhuselekile!)
Nje ukuba ufumane isitshixo semveliso yakho ungafikelela kwiSihogo sethu Masikhulule
Kutheni le nto iGrandpron Hell iyeke iiHack Loose?
I-Gamepron yaziwa njengomboneleli ophezulu we cheats kwiminyaka embalwa ngoku, kwaye kungenxa yokuzibophelela kwethu kumsebenzisi. Sifuna ukuba uxhamle kangangoko xa usebenza nesihogo Masikhulule ukukopela, kuba siyayazi indlela ekunokuba nzima ngayo ngamanye amaxesha-nokuba uvula isihogo Masikhululeke okokuqala okanye kwenzeke Ingcali yamava, ayinamsebenzi! I-hack yethu iya kukunceda uphumelele ngelixa udlala isihogo Masikhululeke kuba awuzukuba naxhala malunga nenqanaba lakho lesakhono rhoqo. Ungahlala nje phantsi ukonwabele amava emidlalo xa usenza into ngobuqhetseba ngeGamepron, njengoko isihogo sethu masivumeleke ukuba sikuncede ube nempumelelo engakumbi.
Nokuba udlala nabahlobo okanye uthanda ukwenza izinto zodwa, ukusebenzisa isihogo sethu makuhlale kuluncedo. Ngeempawu ezinjengeSihogo Masikhulule i-Aimbot, iWallhack, i-ESP, kunye nokunye okuninzi okumangalisayo, esi sisixhobo sokugqibela sokuqhekeza kwabo bafuna ubuqhetseba. Sukuba nexhala malunga nenkqubo yokukhuphela okanye yofakelo nokuba, i-Gamepron yenze lula inkqubo yokukhuphela ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi banokusebenzisa iichibi zethu ngokulula.
Akukho xesha lokulinda nokuba, kanye xa uthengile imveliso yakho, unokufumana ukufikelela kwangoko kwaye ukhuphele i-hack. Ezinye iinkonzo zinokuba ulinde indawo evulekileyo ukuba ivule, okanye mhlawumbi ikunike ukufikelela ngexesha elithile losuku- iGamepron ayinakuze ibanciphise abasebenzisi bethu xa sele befumene ukufikelela. Yiyo loo nto esenza ukuba sibe ngumboneleli ofanelekileyo weSihogo Masikhulule ukukopela kuba akukho mntu ufuna ukuziva ulinganiselwe ngelixa usebenzisa iihacks! Ukuba umgangatho yinto oyifunayo kwiSihogo sakho Masikhululeke, i-Gamepron kuphela komnikezeli oya kuthi ahlangane nemigangatho yakho (ngaphandle kokukunyanzela ukuba uhlawule ingalo nomlenze wokufikelela).
Ukhuseleko sesinye sezizathu zokuba abasebenzisi begxalathelana ukuya kwiGamepron ukufumana izandla zabo ekukhohliseni. Asinakuze sibabeke abasebenzisi kwindawo apho ukuvalwa komsebenzi kungumphumo kuba zonke izixhobo zethu zixhotyiswe ngenkqubo yokukhusela inkohliso. Ngelixa ezinye izixhobo ziya kwenza ukuba ungavunyelwa ukuzisebenzisa, isihogo sethu masikhulule into eyahlukileyo yahluke kakhulu kuloo nto. Uhlala ukhuselekile xa ukhetha ukukopela ngeGamepron (ngakumbi ukuba unomdla wokusebenzisa isihogo Masikhuphe).
Isihogo masilahle iWall Hack (ESP)
Isihogo Mvumele uMdlali aKhulule ulwazi nge-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Isihogo masikhulule into ye-ESP ngezihluzo
Isihogo Masikhulule iAimbot
Isihogo Vumela izilumkiso ezilumkisayo zotshaba
Isihogo Masikhululeke ngokukhululekileyo kwimowudi yokutsiba (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza).
Isihogo Masikhulule ithambo kwaye sijolise kwisitshixo esifanelekileyo.
Isihogo masikhulule sihlawule umbuyekezo
Ngokufanelekileyo Isihogo Masihambe yimfumba Iimbonakalo
Isihogo Mvumele uMdlali oKhululekileyo i-ESP
I-Hell yethu yeLoose Loose hack inikezela uMdlali i-ESP, into evumela umsebenzisi ukuba abone zombini iintshaba kunye nabalingane beqela labo ngokuqina / iindawo ezi-opaque.
Ngamanye amaxesha ukubona umdlali akonelanga, kulapho indawo yethu yoLwazi loMdlali (amagama, imivalo yezempilo, kunye nomgama) ziya kudlala.
Izinto zilula kakhulu ukuzifumana xa usebenzisa i-Item ye-ESP enezihluzi, njengoko zonke ezona zinto ziphambili kumdlalo ziya kubonakala kuwe (akukho mfuneko yokukhangela kwakhona!).
Isihogo Masikhululeke sihlala sibaxhamla abadlali abanezakhono. Sebenzisa isihogo sethu Masikhulule i-aimbot ukuzisa umlo kubachasi bakho kwaye ungaze uphinde uphuthe!
I-Hell Let Loose Bullet track (esebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Sebenzisa inqaku lesilumkiso ukubona ukuba iintshaba zikubeka engozini ngqo. Yenza umyalezo obonisa kwiscreen ukuba uthethe nantoni na oyifunayo!
Isihogo Makuyekwe imowudi yokutsiba ephezulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Umonakalo owayo awuzukuyalela ukuba udlala njani umdlalo kwakhona, njengoko iMowudi yokutsiba Super ingashenxisa ukonakala ngokupheleleyo. Wela naphi na apho uthanda khona esihogweni Masikhulule!
Isihogo Masikhulule ithambo kwaye sijolise kwisitshixo esifanelekileyo
Lungelelanisa isihogo Masikhulule i-aimbot ngethambo lethu kwaye sijolise kuseto olulungelelanisiweyo, ngokunika abasebenzisi ulawulo olupheleleyo kumava abo okukhohlisa.
Isihogo Masikhulule i-aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Iitshekhi ezibonakalayo zisetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba i-aimbot ayijolisisi naziphi na iintshaba ezingakwaziyo ukudutyulwa. Oku kunceda ukuthintela nasiphi na isenzo esikrokrisayo ngelixa ukopela!
Ukuphinda kwenzeke ukubulele ngaphambili, njengoko kuyinxalenye yayo yonke imidlalo yokudubula. Yisuse ngokupheleleyo ngesihogo sethu Masikhuphe iMbuyekezo yeCompensator!
Ukuba sesona sihogo somdlali oDe ulahlekileyo akusoloko kusenziwa malunga nokuziqhelanisa, ngakumbi xa unesihogo sethu masikhulule sikulungele kwaye sikulungele ukuya. Ukufumana ukufikelela kobu buqhetseba kuyakutshintsha indlela yokujonga esihogweni Masikhululeke ngokupheleleyo, kuba akusayi kuba ngumzabalazo wokudlala-usenokonwaba kube kanye! Thenga isitshixo semveliso kwaye ufumane ukufikelela kwiHerole Let Loose cheats.
Isihogo esidumileyo masikhulule iiHacks kunye neKopela
Isihogo Masikhulule i-ESP kunye neWallhack
Esinye isihogo masikhulule iiHacks kunye nokukhohlisa
Esona sihogo sithandwayo masikhulule iiHacks kunye nokukhohlisa kunokufumaneka apha kwiGamepron, njengoko sihlala simamele ingxelo yomsebenzisi ukuphucula ukukhutshwa kwethu. Siyaqonda ukuba zeziphi izinto ezithandwa ngabadlali ukubona ukukopela kwabo, kwaye siziphumeze ngokufanelekileyo. Isihogo Masikhululeke sibe ngumdlalo othandwa kakhulu ngokwawo, ke kusengqiqweni ukufumana ukufikelela kwiGamepron (umboneleli weyona ndawo ithandwayo isihogo Masikhulule!). Sibe ngoyena mboneleli uthandwayo ngenxa yenkxaso kubathengi bethu, umgangatho wee hacks, kunye namava omsebenzisi ajikeleze onke anikezelwa apha kwiGamepron. Xa ufuna ukwazi ukuba uyaphula ngezixhobo ezifanelekileyo, inye kuphela umboneleli onokuthi uyiqwalasele.
Zonke izinto ozithandayo zikho ngaphakathi kobuqhetseba, njengoko sibandakanye isiHogo Masikhulule, iAimbot, i-ESP, iWallhack, kunye nezinye iihacks ezongezelelweyo ezenza inkohliso iye kwinqanaba elitsha. Ukufumana ukufikelela kwiGamepron namhlanje kwaye ube nebhongo ngezixhobo ozisebenzisayo!
Ukuba uneenjongo ezimbi, awuwedwa- kukho iitoni zabasebenzisi phaya abanqunyelwe ngelixa bedlala isihogo Masikhululeke kuba abananjongo zigqibeleleyo. Kuya kufuneka uzilolonge izakhono zakho ukuze ube yeyona nto ibalaseleyo, okanye unokufumana ukufikelela nje kwiSihogo sethu Masikhulule i-aimbot! Esi sixhobo siza kuqinisekisa ukuba zonke iifoto zakho zithathwa kunye nokubanjwa okubulalayo kuba alikho ithuba onokuphoswa sisihogo sethu Masikhulule i-aimbot yenziwe. Iintshaba zakho ziya kungcangcazela luloyiko xa ziqonda ukuba ungamandla angenakuthintelwa, kwaye konke abanethemba lokukwenza kukushiya indlela!
Esi sihogo masikhulule i-aimbot iza nezinto ezininzi zokwenza ngokwezifiso, enika abasebenzisi ithuba lokumisela ngokuchanekileyo indlela esisebenza ngayo isixhobo. Ungahlengahlengisa ubungakanani beSangqa sakho se-FOV, isantya se-Aimbot / ukutyibilika, kwaye ukhethe nokuba zeziphi iindawo zotshaba ofuna isixhobo sethu sijolise kuzo.
Sebenzisa i-Hell Let Loose ESP kunye neWallhack ukubona ukuba bonke abadlali kumdlalo wakho bakuphi! Akunyanzelekanga ukuba ubone iintshaba ukuba ziphi apho ukukopela kunikwe amandla, kwaye lelona candelo lililo- unokuzibona iindawo eziyingozi kwaye uziphephe (okanye usondele kubo ngqo!). Ngawo onke amanqaku afakiwe kwiSihogo sethu Masikhulule, ungenza nantoni na ongathanda ukuyenza; ukuqonda ukuba zeziphi ezona zinto zibalaseleyo (Into ye-ESP), ezona ntshaba zibuthathaka (Umdlali we-ESP onolwazi loMdlali), kunye nezinye izinto (Ukuqhuma, ukuphanga, imoto ye-ESP) akuzange kube lula.
Abanye abadlali baya kusokola ukubona apho abachasi badubula khona, okanye nalapho ikhoyo eyona mipu ilungileyo; ungenza nje ukuba isihogo sethu sivule i-ESP kwaye uzifumanele zonke ezo zinto. Abasebenzisi beGamepron bonakele kwisebe le-ESP, sinokukuthembisa kakhulu. Fumana ukufikelela namhlanje kwaye ujoyine ulonwabo!
Ukunyathela luphawu uninzi lwabanikezeli bemikhangeli olungenakuze luqwalasele ukubandakanya ukukopela kwabo, njengoko kunokuba nzima ukuphumeza. Ngombulelo, sonke sisoyisile umceli mngeni apha kwiGamepron- yiyo loo nto siquke into eyenzeka kwindawo yethu! Ungasoloko ubona apho iintshaba zihamba khona kunye neli nqaku, kwaye ungasebenzisa umgama omde ukubona ukuba ukufutshane kangakanani na. Olu luhlu olufanelekileyo lweempawu zabadlali abonwabela ukulandela intshaba zabo, ngaphambi kokuba babakhuphe bethe cwaka (ngokukhethekileyo kwindawo eyodwa!).
Umonakalo ophezulu usetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba uhlala unika umonakalo omkhulu kunokuba uthatha. Ngelixa kungekho sixhobo kwintengiso sinakho ukwenza "Indlela kaThixo" Esihogweni Masikhulule, Umonakalo oPhezulu kufuneka ube yeyona nto ikufutshane kuyo. Uhlala uzitshitshisa iintshaba zakho ngendlela enzima kunokuba zinokubetha, ezinokubangela uloyiso olulula.
Zininzi ezinye ii-hacks kunye ne-cheats ekufuneka ziqwalaselwe ngaphakathi kwesixhobo sethu sesihogo Masikhulule, kodwa ekuphela kwendlela yokufumana inzuzo kubo kukufumana ukufikelela. Ungathenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye ufumane ukufikelela kuzo zonke ezi zihogo zimangalisayo, kwaye ungakwenza oko kwangoko-sivumela abasebenzisi bethu ukuba bakhuphele ukukopela kwabo kwakamsinya emva kokuba benesitshixo semveliso esifanelekileyo. Ixesha elimiselweyo kuphela kwento eya kuthi inciphise umsebenzisi weGamepron, kwaye unokuthenga ixesha elininzi wakube imveliso yakho iphelile! Inani leempawu ezibandakanyiweyo ngaphakathi kwethu Isihogo Masikhulule ukukopela kukhulu kakhulu, njengoko ukuthanda iMagic Bullet, iRadar, iSpeedhack, kunye nezinye izinto zibonakala.
Unokukhubaza umlilo onobuhlobo,
kunye nokutshixa kwiithagethi ezithile ngesihogo Masivule i-aimbot. Ulawula ikamva lakho xa usebenzisa isihogo sivumele ukukopela, yiyo loo nto yenza iGamepron ibe yeyona ilungileyo.
Isihogo Masikhulule iiHacks imibuzo
Kutheni isihogo sethu masikhulule iiHacks zethu
Ii-hacks zethu azisoze zamyeke umsebenzisi, njengoko kukho amandla omlilo amaninzi kakhulu ukuba asebenze nawo. Uya kuhlala uphumelela ngakumbi kunangaphambili ngaphambi kokufikelela kwiHell Let Loose hacks, kodwa ekuphela kwendlela yokuzazi ngokwakho kukuzama. Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye uza kubona ukuba kutheni sibanjelwe phezulu apha eGamepron!
Kutheni isihogo sethu masikhulule iAimbot
I-aimbot elungileyo iya kuhlala inceda abasebenzisi ukuba bagqwese esihogweni Masikhululeke, yiyo loo nto isihogo sethu Masikhulule iLoose ithathelwe ingqalelo "njengeyona nto iluncedo ekhoyo". Xa usazi ukuba izithonga zakho ziya kuthathwa ngokuchaneka nge-100%, inqanaba lokuzithemba olibonisayo ngelixa udlala isihogo Masikhululeke ngaphezu kokwaneleyo ukugcina uqhubeka.
Kutheni isihogo sethu masikhulule i-ESP
I-ESP imele ukuBona okuQhelekileyo kokuqonda, kwaye abanye abantu bayayijonga njengengqondo yesi-6. Uyakwazi ukubona iintshaba kunye nabalingane bakho kwiindawo eziqinileyo / ezi-opaque, kodwa iSihogo Masikhulule i-ESP ikwabonelela ngokuthandwa kwe-Item ESP (kunye neNkcukacha zoMdlali i-ESP). Ngokufikelela kulo lonke olu lwazi, ungahamba ngomdlalo kwaye ukhusele ukuphumelela ngokulula.
Kutheni isihogo sethu masikhulule iWallhack
IiWallhacks ziyimfuneko ngelixa udlala imidlalo efana nesihogo Masikhulule, njengoko zininzi izoyikiso zokuqwalaselwa ngexesha lokuzonwabisa kwakho. Nokuba unezona zixhobo zibalaseleyo kwaye ujolise kuzo, usafuna ukugcina ubukho bendalo- ukuba ne-aimbot auto-lock kwiintshaba ezifihlakeleyo kunokuba yinto enzima ngamanye amaxesha! Sebenzisa i-Hell Letose Loose wallhack ukubona ukuba bazifihle phi
Kutheni isihogo sethu masikhulule iNorecoil
Ngokufana nezinye izinto ezininzi esivumela abasebenzisi ukuba bazisuse, ukuphinda ubuye yenye yezo zinto zikunyanzelayo ukuba ubuze ubomi uqobo. Kutheni le nto ufuna ukujongana nokubuyela umva kumdlalo wokudubula? Sebenzisa isihogo sethu Masikhulule siSuse into yokuba siyisuse ngokupheleleyo kwaye sinyanzele umpu wakho ukuba uchaneke kube kanye! Ngaphandle kokubuyisa, ungazisebenzisa izixhobo zethu ngokwendalo.
Ungazikhuphelela njani ezona ndawo zilunge kakhulu kwiHogo?
Unokuzikhuphelela esona sihogo sibalaseleyo Masikhululeke ngokuthenga isitshixo semveliso kuthi apha kwiGamepron. Nje ukuba ufumane isitshixo semveliso ungafikelela ekukopeni kwaye uzikhuphelele kwangoko, akukho mfuneko yokuba ulinde! Inkqubo yokukhuphela kunye neyofakelo yethu yesihogo Masivule ukukopela yinto elula kwaye inokwenziwa nangabadlali abathandekayo abajikelezayo.
Kutheni le nto isihogo sakho sivumele iiHacks ezishiyekileyo zibize kakhulu kunezinye?
Nokuba ungoyena mdlali wekhompyuter weyona novice emhlabeni, kufanelekile ukukopa njengaye wonke umntu. Ukukhwabanisa kulula xa usebenza neGamepron, kwaye kukhuseleke kakhulu- yiyo loo nto kufuneka sibize ixabiso leprimiyamu ngazo zonke izixhobo zethu. Isihogo sethu masikhulule i-hack yi-100% engafumanekiyo, kwaye sikwanenani elithile kuphela leendawo zokubeka iserver ezikhoyo ngalo naliphi na ixesha.
Sebenza ne-Gamepron ukwakha ishedyuli yokubamba eguqukayo! Sivumela abasebenzisi ukuba bakhethe ukuba bafuna ukufikelela ixesha elingakanani kwiSihogo sethu Masikhulule, njengoko sinexesha elininzi lokukhetha xa kuziwa kwimveliso yethu. Unokukhetha ukuthenga usuku-olu-1, i-1-iveki, okanye isitshixo semveliso seenyanga ezi-1 xa usebenza nathi eGamepron. Hlala ubhetyebhetye xa ukopela!
Kuhle Isihogo Masihambe yimfumba Iimbonakalo